प्रेमिकालाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ ? यी कुरा कहिलै नगर्नुस ! – Sanjal Nepal
Homeरोचकप्रेमिकालाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ ? यी कुरा कहिलै नगर्नुस !
प्रेमिकालाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ ? यी कुरा कहिलै नगर्नुस !
January 1, 2021 admin रोचक 2261
के तपाई कसैलाई माया गर्नु हुन्छ ? अनि उसैसँग लामो समयसम्म प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ/जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ ?
यदि तपाईको कुनै प्रेमिका छिन् र यहाँ सोधिएको उत्तरमा तपाईको सकारात्मक मत रहेको छ भने आज हामी तपाई समक्ष केहि यस्ता राम्रा टिप्स दिदै छौ जसको सहयोगमा तपाईलाई तपाईको प्रेमिकाले सधै भरि माया गर्ने गर्छिन |
भनिन्छ नि ! केहि कुरा पाउन केहि गुमाउनु पर्छ | यस्तै यसका लागि तपाईले आफ्नो बानीमा केहि सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ | नआत्तिनुहोस ! त्यस्तो केहि गारो विषय छैन | सजिलै गर्न सकिने विषय छन् जसले तपाईको सम्बन्धलाई निकै अगाडी सम्म पुर्याउने छ | यसका लागि तपाइले आजै देखि यी कुरा हरुमा ध्यान दिनु आवश्यक छ |
सोसल नेटवर्किङमा पिछा
भेटेको केहि समयपछि नै महिला फेसबुकमा गएर उनको निकै अघिदेखि राखिएको सबै फोटोहरुमा लाइक नगर्नुहोस् । संवेदनशील महिलाहरुलाई कसैले पनि छोटो समयमा यति बिधि प्राथमिकता दिएको पटक्कै मनपर्दैन । यसो गर्नुभयो भने उनी तपाईंबाट प्रभावित नभई तपाईंबाट टाढा जान खोज्नुहुन्छ ।
विवाहको बारेमा संकेत नदिनुहोस्
पुरुषहरु कुनै पनि कमिट्मेन्ट गर्न डराउँछन् भन्ने कुरा पुराना भइसकेको छ । वास्तविकता के हो भने महिलाहरु कम परिचित पुरुषहरुसँग कमिटेड हुन डराउँछन् । हुनसक्छ तपाईं आफ्नो सम्बन्धप्रति निकै सिरियस हुनुहुन्छ होला र उनीसँगै आफ्नो बाँकी जीवन व्यतित गर्न चाहनुहुन्छ होला तर उनले तपाईंले जे सोच्नु भएको त्यस्तो नसोचेको हुनसक्छ । पहिले आफूले मनपराएको महिलाको तपाईंप्रति राख्ने भावनाको बारेमा बुझ्नुहोस् ।
पैसाको सो–अफ नगर्नुहोस्
महँगो उपहार दिएर महिलाको मन जित्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सोचाई तुरुन्त त्यागिदिनुहोस् किनभने महिलाहरुलाई आफ्नै कमाईले आफ्नो शोक र आवश्यकता पूरा गर्न मनपर्छ । त्यसकारण आफू धेरै धनी छु भनेर देखाउन नखोज्नुहोस् ।
पटक–पटक अपडेट लिइरहन आवश्यक छैन
कसैलाई बुझ्न चाँहदै हुनुहुन्छ भने उनको हरेक मिनेटको खबर लिइरहन आवश्यक छैन । यो सोच्नुहोस्, तपाईंलाई भेट्नुभन्दा अघि पनि उनी खाना खान्थिन्, तपाईंको गुडनाइट मेसेज बिना नै सुत्ने गर्थिन । पटक–पटक अपडेट लिने तपाईंको बानीले तपाईं पागलजस्तै उनको पिछा गरिरहनुभएको छ त्यसकारण महिला तपाईंसँग नजिक हुनुको साटो टाढा हुनेछिन् ।
पटक–पटक फोन नगर्नुहोस्
यदि तपाईंले प्रभावित पार्न चाहनुभएको महिलाले कुनै कारणवश अथवा व्यस्त हुँदा तपाईंको फोन उठाउन चाहनुभएको छैन र तपाईंको मेसेज फर्काउँदिनन् भने तपार्ईंको बारम्बारको फोन र मेसेजले उनलाई प्रभावित पार्नुभन्दा बढि तनाव दिने गर्दछ ।
बिल सधैँ आफैँले नै नतिर्नुहोस्
यदि तपाईं बाहिर कतै खानको लागि निस्कनु भएको छ भने उनले बिल तिर्दा केहि पनि फरक पर्दैन । यदि तपाईं सधैँ बिल आफैँले तिर्न हठ गर्नुहुन्छ भने तपाईंले उनलाई कृपा गरिरहेको सम्झनु हुनेछ । खर्च बाँड्दा त्यसले उनको आत्मसम्मानलाई कायम राख्ने गर्दछ ।
सेक्सको कुरा नगर्नुहोस्
केहि दिन पहिले मात्र सुरु भएको तपाईंको सम्बन्धमा सेक्सको बारेमा कुरा नगर्नुहोस् । यसले तपाईंको छविलाई बिगार्ने गर्दछ । तपाईंले सेक्सको बारेमा कुरा गर्दा ती महिलाले तपाईंले पहिले पनि अरु थुप्रै महिलालाई प्रयास गरिसकेको उनले बुझ्नेछिन् । आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि थोरै समय दिनुहोस् ।
पुरानो सम्बन्धमा घमण्ड नगर्नुहोस्
तपाईंले थुप्रै महिलासँग सम्बन्ध गाँसिसकेको भन्दै घमण्ड गर्न छोड्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंको पहिलोको सम्बन्ध बिग्रनुमा तपाईंकै हात भएको उनले बुझ्नुहुनेछ ।
नचाहिने कुरामा उपहार बर्साउनु ठिक होइन
नचाहिने कुरामा उपहार दिइरहँदा उनलाई दिक्क लाग्न सक्छ । पैसाले तपाईं उनको माया किन्न सक्नुहुन्न । तपाईंको यस्तो बानी छ भने तुरुन्त हटाउनुहोस् ।
पर्सनल लाइफमा बाधा नपुराउनु
महिलालाई तारिफ गरेको मन त पर्छ तर पटक–पटकको तारिफ पनि उनीहरुलाई झर्को लाग्ने गर्दछ । सम्बन्धको सुरुवाती अवस्थामा तपाईं उनको लवाई–खुवाईमा टिप्पणी गरेर उनलाई सल्लाह दिनुहुन्छ भने उनलाई त्यो राम्रो लाग्दैन । महिलालाई उनको पर्सनल लाइफ र उनीहरुको साथीको बारेमा थाहा पाउने कोसिस नगर्नुहोस् ।
रुघा लाग्यो भनेर तुलसीको पत्ता मिसाई तातो पानी खाने गर्नु भएको छ भने यस्ता व्याक्तीले भुलेर पनि नगर्नुहोस तुलसीको पत्ताको सेवन।जान सक्छ ज्यान
बेहुलाले बुलेट बाईकमा बेहुली लिएर घर फर्किए, भिडियो भयो भाईरल पुरा हेर्नुहोस्
December 19, 2020 admin रोचक 5630
विवाह दुई व्यक्तिहरू मध्य (प्राय: एक नर र एक नारी)को सामाजिक, धार्मिक अथवा कानुनी रूपबाट एक अर्का संगै जीवन ब्यतित गर्ने सम्बन्ध हो। विवाहले दुइ परिवार बिच नया नाता सम्बन्ध जोड्ने काम गर्छ । नेपाल
August 2, 2020 Administer Banner Post, मनोरंजन, रोचक 131873
The number of americans signing on in Kerry jumped ultimate ages, nevertheless it is significantly below the figure for the same duration ultimate 12 months and neatly under recession levels. electronic mail The variety of
श्रीमानले २ लाख ५० हजार भारुमा आफ्नै श्रीमती र छोरा बेचे कोठी वाट भागेर नेपाल आए की चेली को रुँदै सकियो अन्तरबार्ता
January 4, 2021 admin रोचक 3592
काठमाडौ । आफ्नै श्रीमानले भारतमा लगेर बेचेको घटना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमानसंग भारत गएकी उनलाई श्रीमानले नै बेचेर आए पछि उनी भागेर नेपाल आइपुगिन् । श्रीमानले भारतमा अरु पुरुषसंग सम्बन्ध राख्न समेत लगाएको महिलाले
LEX 18 agenda conversation: Job club (544591)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515041)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131873)